आनन्दवनका डाक्टरहरुसँग कोरोना खोपको अनुभव « Lalitpur Khabar
नेपाल सरकारले बुधबारबाट देशभर कोरोना खोप अभियान शुरु गरेको छ । भारत सरकारको अनुदानमा ल्याइएको नामको यो कारोना खोप आगामी आइतबारसम्म ५ दिन लगाउने कार्यक्रम छ । २ पल्ट लगाउनु पर्ने कोरोना खोप धेरामा रहेका पहिलो चरणमा देशभरका स्वास्थ्य सेवामा काम गर्नेहरुलाई लगाइने छ । एक महिनाको अन्तरमा दोश्रोपल्ट लगाउनु पर्ने यो खोप भारतले १० लाख डोज उपलव्ध गराएको हो ।
बुधबार कोरोना खोप लगाएलगत्तै ललितपुर लेलेस्थित आनन्दवन अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी डा. प्रदिप सापकोटा र सँग ललितपुर खबरले कोरोना अनुभवबारे कुरा गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानकिो सम्पादित अंश ः
हार्डजोर्नी विशेषज्ञ तथा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेट
आन्नदवन अस्पताल टिकाभैरव
भारत सरकारले दिएको कोरोना खोप लगाउदा आनन्द लाग्यो । धेरै लामो समयदेखि कोरोना खोपको प्रतिक्षामा रहेकाले उत्साहित छौं । र ढुक्क पनि भएका छौं ।
हामीले टिटि खोप लगाउदा भन्दा धेरै कम दुखाई भएको अनुभव भयो । खोप लगाउदा दुखेन ।
म शुरुदेखि नै कोरोनाको विरामीहरुको उपचारमा खटिए । आनन्दवनमा कोरोना वार्ड शुरु हुँदादेखि नै मैले जिम्मेवारी लिएर काम गरे । त्यो बेला पनि मलाई कोरोना संक्रमणदेखि डर लागेको थिएन । मैले यसलाई सुनौलो अवसरको रुपमा लिएको छु । हामी स्वास्थ्यकर्मीहरुले कोरोनाविरद्धको खोप लगाउने शौभाग्य पायौं । यसमा खुशी छौं ।
कोरोना खोप लगाउदा डर लागेन । यो पहिले पहिले बनेको हुनाले डर लाग्नु स्वभाविक पनि हो । तर यो खोपको क्लिनिकल ट्रायल र धेरै चरणहरु पार भइसकेका छन् । नलगाउनु भन्दा लगाउदा कम जोखिम देखेर नै मैले कोरोना खोप लगाउने निर्णय गरेको हुँ ।
कोरोना खोप सोचेको भन्दा धेरै पहिले नै लगाउन पाएको महसुस भएको छ । नेपालमा कोरोना आएको १० महिनामै कोरोनाको खोप आउन सफल भयो । कोरोना संक्रमणको शुरुका दिनहरुका कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप बनिहाले पनि हाम्रोजस्तो कम क्षमता भएको देशमा आईपुग्न कम्तिमा ४÷५ बर्ष लाग्छ भन्ने लागेको थियो । तर मित्रराष्ट्र भारतले अनुदानमा कोरोना खोप दिएको छ । सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि यो खोप उपलव्ध गराउन पहल ग¥यो । हामीले धन्यवाद भन्नैपर्छ ।
कोरोना संक्रमितहरुको उपचार हामीले पहिलेदेखि नै गरिरहेका हौं । निशन्देह हामीले यो काम निरन्तर गर्ने नै छौं । जवसम्म संसारमा कोरोना रोग रहिरहन्छ हामी उससँग डटेरै विरामीको सेवा गर्नेछौं ।
र खोप लगाए भन्दैमा कोरोना संक्रमणबाट बच्न मास्क लगाउने, दुरी कायम गर्ने र हातको सफाई गर्नेजस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनैपर्छ । कम्तिमा ७० प्रतिशतनेपालीहरुले कोरोना खोप नलगाउञ्जेलसम्म स्वास्थ्य सर्तकता अपनाउन जरुरी छ । स्वास्थ्यका नियम मान्न छोड्नु हुँदैन ।
कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेहरुप्रति श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछु । जो कोरोनासँग लडेर जित्नु भयो । एक किसिमको इमिनिटी पावर बढाएको हुनसक्छ । तर त्यो एन्टिबडी धेरै समयसम्म शरिरमा बसिरहेको छ भन्न सकिन्न । एण्टिबडीले भन्दा कोरोना खोप धेरै नै उपयोगी हुन्छ भन्ने तथ्यहरुले देखाएको छ । कोरोनासँग जिते भन्दैमा खोप लगाउदिन भन्नु हुँदैन । खोपले लामो समयसम्म सुरक्षा दिनसक्छ ।
म ती दिनहरु सम्झन्छु । नेपालका भर्खर कोरोना संक्रमण भित्रिएको थियो । गत चैत्र ११ गते म आनन्दवन अस्पताल आउन गाडी लिएर सातदोवाटोबाट अघि बढे । बाटो सुनसान थियो । सडकमा प्रहरी नै प्रहरी थिए ।
सातदोवाटोमा प्रहरीले मेरो गाडी रोके । म अस्पतालको कार्ड देखाउदै टिकाभैरवस्थित आनन्दवन अस्पतालसम्म आए । त्यो दिन टोल,बस्ती अनि अस्पताल पुरै सुनसान थियो ।
यो क्रम दुई हप्तासम्म चल्यो । मैले जीवनमा कहिले पनि अस्पताल यसरी बन्द भएको देखेको थिइन ।
हामीले अस्पतालको एमर्जेन्सी खोल्यौं । केही समयपछि वार्ड पनि खोल्यौं । केही समयपछि आनन्दवन अस्पतालमा समेत हामीले कोरोना वार्ड खोलेका थियौं । केही समयसम्म कोरोनाको विरामी फेला परेका थिएनन् । तर जव कोरोनाका विरामी हाम्रो अस्पतालमा फेला पारेका थियौं । हामी अति डराएका थियौं । कोरोनादेखि सर्तक हुदै अनेकौं बाधा छिचोल्दै हामी आज कोरोना खोप लगाउने अवस्थामा आइपुगेका छौं ।
हामीले सोचेको भन्दा धेरै पहिले खोप पाएका छौं । हामी अहिलेगर्व गर्ने अवस्थामा छौं । छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतलाई हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ । नेपाल सरकारले पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई भनेर कोरोना खोप ल्याएर राम्रो काम गरेको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाको बज्रवाराही चापागाँउ अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड शुरु भइसकेको थियो । त्यसबेला आनन्दवन अस्पतालमा पनि आइसोलेशन चाहिन्छ भनेर हामीले पनि शुरु गरेका थियौं । गोदावरी नगरपालिकासँग हातेमालो गरेर हामीले काम गरेका छौं । हामीले यो सहकार्य अझ बढाएर लैजानु पर्ने आवश्यकत्ता छ । हामी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनसँग निरन्तर छmफलमा छौं । उहाँहरुले आफ्नै ठानेर हामीलाई डो¥याएर लगिरहनु भएको छ ।
२.डा. महेश शाह
मेडिकल डाइरेक्टर, चर्मरोग तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ ,आनन्दवन अस्पताल
कोरोना खोप लगाउदा कुनै अंकोच र शंका नमानेर यस अस्पतालको मेडिकल डाइरेक्टर भएको नाताले मैले पहिलो खोप लगाएको हुँ । आफू डाक्टर भएको हुँदा अरु विरामीले भन्ने गरेको सुनेको थिए ,‘डाक्टरसाहेव सुई लगाइदिनु भयो मलाई त थाहै भएन ।’ मलाई पनि यस्तै लाग्यो कमिलाले टोकेजस्तो ।
कोरोना एउटा विश्वभर माहामारी रुपमा फैलिएको छ । विश्वभरका मानव जातीलाई नष्ट गर्ने अवस्था आएको छ । तर विश्वभरका बैज्ञाविकहरु एकजुट भएर खोपहरुको आविश्कार गरेका छन् । एक वर्ष नपुग्दै तयार हुनु खुशीको कुरा हो ।
मित्रराष्ट्र भारतमा बनाइउको यो खोप हामीले यती धेरै चाडो लगाउन पायौं । भारत सरकारलाई हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ । हामी स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित पार्ने खोप अभियान शुरु भएको छ । यसबाट हामी धेरै खुशी छौं । आनन्दवनमा यो खोप लागाउन पाएकोमा सरकारलाई धेरै धन्यवाद छ । हामीपछि अरु विभिन्न पेशा व्यावसायमा रहेका जनताको पालो आउछ । कोरोनासँग लड्ने शक्ति यो खोपले पाइने छ हामी सुरक्षित हुनेछौं ।
खोप लगाएपछि हामी निधक्क छौं । आजकल नेपालभर धेरै कोरोना संक्रमित मृत्युवरण गरिरहेका छन् । यो खोपमा जिवित जिवाणु नभएकाले यसले कोरोना खोप लगाउनेहरुलाई नगन्य असर गर्छ । खानेकुराको पनि एर्लजी हुन्छ । औषधिको पनि एलर्जी हुन्छ । यसबाट दिर्घकालीन रुपमा असर गर्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट विश्वास छैन ।
यो सुरक्षित खोप भन्ने लागेको छ । हामी सबैले लगाएपछि मात्रै नियन्त्रणमा आउँछ । खोप लगाएपछि पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक छ ।
ललितपुर खबर ७ जेठ ०७८, ललितपुर । आजकल टाल समाज जहाँ त्यही कोरोना स.क्रमितहरु
गोपाल सञ्जेल आदरणीय व्यक्तिहरुलाई नमस्कार गर्नु पूर्वीय सभ्यता नै हो । नमस्कार गर्दा दुवै हात